Andinakhuphiswano | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 16, 2009 NgeCawa, ngo-Novemba 3, 2013 Douglas Karr
Ndiyazi ukuba izandi zinekratshi. Andithethi njalo. Nanini na xa ubani ekhankanya ukhuphiswano kwinkampani endandisebenza kuyo, ndandigculela. Ndihlala ndinayo. Umntu othile undixelele kwakanye ukuba akunakwenzeka ukuba ujonge emva kwakho kwaye ugqatso phambili ngesantya esiphezulu. Ndiyakholelwa ukuba uloyiko lukhubaza iinkampani.
Andikhuthazi Uziva ukhuphiswano lwakho… yonke inkampani kufuneka iqonde izibonelelo ezizisa etafileni. Okubaluleke ngakumbi kunenzuzo yakho yokhuphiswano, nangona kunjalo, ingaba ukhona okanye awukho umdlalo phakathi kwezi zibonelelo kunye ezona mfuno zomthengi. Ndikhulisa ishishini lam kwasekuqaleni ngoku kwaye kwiintsuku zokuqala ndenza wonke umsebenzi endinokukwenza ukuqinisekisa ukuba ndinokuhlala ndisebenza. Xa sijonga emva, eso yayingesosigqibo silungileyo… ngendandidlulisele uninzi lwezo projekthi kwaye abathengi ngeba bonwabile, mhlawumbi bonwaba ngakumbi.
Ugxininiso lwam ngoku kukudala ubudlelwane kunye neearhente ezinkulu, iifemu zonxibelelwano noluntu, kunye nokuqhubeka nokwandisa ubudlelwane endinabo kunye nabathengi abakhulu kakhulu. Kule veki, ndibhekise amathemba amabini amlungileyo kum ukhuphiswano. Yinto elungileyo ukuyenza. Andinako ukubanika obu budlelwane ngononophelo olubafaneleyo kwaye andinazo izixhobo zokuqinisekisa impumelelo yabo… kutheni ke ndingazibeka emngciphekweni ngegama lam?
Apha e-Indianapolis, kukho iqela elikhulu labantu abanetalente abanokubonelela ngeenkonzo ezifanayo endizibonelelayo. Iinkampani ezinje NgqoThagethi, Ekunene kwi-Interactive, Isihlomelo, Kwaye inani loyilo lwewebhu kunye neearhente zophuhliso zineemveliso kunye neenkonzo endinokubonelela ngazo… kodwa andizukuyenza. Banotyalo-mali, iziseko zophuhliso, inkxaso kubathengi kunye nezixhobo endingenazo. Kungcono kumthengi.
Kwicala leSocial Media, bambalwa kuthi edolophini… bonke endikholelwa ukuba zizihlobo zam. Njengoko sisondela kwamanye amashishini amakhulu edolophini, elowo kuthi uya kuzisa umbono wakhe etafileni. Andikhathali ngokukhuphisana nabo kweli nqanaba. Kwakhona, ndixhalabile ngakumbi ukuba inkampani iyayifumana kunene isixhobo. Ukuba ndiyazithumela kwaye ziyimpumelelo, sonke siyaphumelela. Ndijongeka ndilungile ngokubathumela, ukhuphiswano lwam lufumana ishishini, kwaye ndiza kufumana umnxeba wokuqala kwithuba elilandelayo, nam.
Kutshanje, inkampani enkulu (enkulu) yasekhaya indinike indawo yokundinyanzela ukuba ndibanikeze iinkonzo zasimahla kubo. Ndibathumele nje kumntu endisebenza naye oqale wajonga nam. Xa oko kugxothwa ngasemva, babuya beza kum kwaye ndabazisa ukuba andinamdla.
Kwelinye icala, kukho iiarhente ezimbalwa edolophini ngoku ezinxibe ngokuzingca ngee-monikers zokuphuculwa kweinjini yokukhangela okanye ubuchwephesha beendaba zosasazo. Nangona bengakhange bongeze mntu kubasebenzi babo ngobuchwephesha, kwaye khange babe naziphumo kubaxumi kwezo ndawo zemidlalo, bayaqhubeka nokuxhaphaza iinkampani ezifuna ezo nkonzo. Bangabasomathuba, babonelela ngenkonzo nganye umntu afuna ukuyibuza. Andiyithandi into abayenzayo kwaye ndithetha ngokuchasene nabo rhoqo kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba ujonge enjini yokukhangela noun umboneleli, yenza uphando kwaye uza kufumana ukuba ngubani ophumeleleyo ekukhangekeni. Kulula kanjalo. Ukuba ujonge ingcali kwimidiya yoluntu, yiya kwiminyhadala yengingqi, jonga ukuba ngubani oqale uthungelwano lwengingqi olunempumelelo, kwaye uqaphele ukuba ngubani olandeleyo. Iya kucaca gca ukuba ngubani onobungcali kwaye ngubani ongenayo. Oosomashishini bashiya iinyembezi.
Andikholelwa ukuba ndinokhuphiswano. Umsebenzi wam kukubona ukuba ndiyilungele na intlungu yenkampani. Ukuba andilunganga, ndiyaqhubeka. Kungenxa yoko le nto ukubandakanyeka kwam kukhula, ndifumana ixesha elininzi lokusebenza kwizinto endizithandayo, abathengi bam bayazibona iziphumo abazifunayo, kwaye ndonwabile… kwaye ndophukile;).
Ucinga ntoni? Uya ngempela ukhuphiswano?
tags: ishishiniubudlelwane kwezoshishinointsebenziswanoukhuphiswanointsebenziswanoUkunika amandla ukuthengisa
Ngaba uGoogle uzama ngenene ukwenza iWebhu ibe ngcono?
Nov 17, 2009 kwi-2: 48 AM
Kulungile wena msebenzi kukuqinisekisa ukuba iinkampani ezifuna ukwenza ishishini kunye nawe zabelana ngeenjongo zakho kunye neenqobo zakho zokusebenzisana. Kodwa kumnandi ukwazi ukuba ugqibile ukuziqengqa kwaye wenza nantoni na umthengi ngamnye ekucela ukuba uyenze kuba becele.
Nov 17, 2009 kwi-3: 17 AM
Ngokwengqondo, ndigqibile Mat. Ndisenako okushiyekileyo ukuba ndikuphathe, nangona kunjalo. 🙂
Nov 17, 2009 kwi-2: 53 AM
"Omnye umntu wandixelela kanye ukuba akunakwenzeka ukuba ujonge emva kwakho kwaye uqhubeke phambili ngesantya esiphezulu."
Ndiyavuma ngokupheleleyo! Kutshanje sineenkampani ezimbini ezibonelela ngeenkonzo ezifanayo kwaye zenza ngathi zinomdla wokusebenzisa iinkonzo zethu. Bazicacisa kakuhle, bade baya kuthi ga kwixa lokusinika igama lomntu obabhekisileyo. Ke ngelixa begcwalisa iifom kwiwebhusayithi yethu, betsalela umnxeba kwaye beshiya imiyalezo ye-voicemail, kwaye besithumela nge-imeyile ngolwazi oluthe kratya ebesikulo sithetha nabo bafuna ukuba ngabathengi. Babeza kuchitha ixesha labo bencokola ngcono nethemba kunye nokubonelela ngenkonzo enkulu kubathengi.
Ngokuseleyo, nam ndiyavuma. Bazi ubuchule onabo. amandla kunye nezixhobo. Yenza ubudlelwane obuzuzisayo kunye nabo bakungqongileyo. Wonke umntu uyaphumelela ngoko.
Nov 17, 2009 kwi-3: 05 AM
Iposi entle, uDoug. Ndiyavuma ngentliziyo yam yonke.
Kuyathakazelisa ukuqaphela inguqulelo yesiLatin yokhuphiswano yile, "Ukuzama kunye ukuphucula zonke izinto." Umbono wabaphumeleleyo kunye nabaphumeleleyo waziswa ngamaFrentshi ngekhulu le-16. Bayeke amaxoxo, eh?
Nov 17, 2009 kwi-3: 18 AM
Isicatshulwa esimangalisayo, Amy! Khange ndiyiqonde ukuba… inkwenkwe siyalisebenzisa kakubi elo gama apha eMelika!
Novemba 17, 2009 ngo-5: 24 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe ukuba abantu abaninzi abaqesha ababoneleli ngeenjongo zabo ze-SEO bazama ukufumana iinkonzo zasimahla. Enkosi iintloko phezulu.
Novemba 17, 2009 ngo-6: 49 PM
Andikwazi ukuvumelana nale nto ngakumbi. Ndicinga ukuba ixesha elininzi lichithwa kugxilwe kwixhala labakhuphisana nabo. Ngokukodwa kwiimarike ezinamandla njengamajelo eendaba ezentlalo kunye ne-SEO, ekhula ngokukhawuleza, kukho indawo eninzi yokhuphiswano, kwaye kunokwenzeka ukuba usweleke ngenxa yokuba ungahambelani kakuhle nabathengi kunokuba abo bakhuphisana nabo besitya isidlo sakho sasemini .
Novemba 17, 2009 ngo-10: 03 PM
UDoug-njengangaphambili, ndiyayithanda indlela yakho. Ndisoloko ndinengqondo yokuba xa kufikwa kwizibhengezo xa kuthelekiswa nokwenza ishishini ngokwakho, ukuba umthengi uphela onwabile, baya kukhumbula ukuba BONWABILE, nokuba kuthunyelwe nje. Ukuhamba kulungile njenge-hit, akunjalo?
Ngapha koko, uninzi lweenkampani zihlala zixabisa yonke intembeko yokwazi ukuba bacela into ongenakukwazi okanye ongafanele uzame ukuyinika kunye nokunyaniseka ngayo. Ukuba inkampani ayiyixabisi loo nto kwaye ixhalabile ngokugcina imali, awubafuni umthengi nokuba kunjalo, akunjalo? Kulula ukutsho kwaye kunzima ukulandela ngobume bezoqoqosho obukhoyo, kodwa ngamagama onokuphila ngawo… okanye amagama ubuncinci ukusihambisa.
Novemba 17, 2009 ngo-11: 20 PM
UDoug, ndiyakholelwa xa uchitha ixesha lakho elixabisekileyo uzikhathaza ngento oyenzayo kolu khuphiswano: Ukuqhubela phambili nokungasebenzi endaweni ekungqongileyo sisiseko sempumelelo.
Nov 21, 2009 kwi-3: 33 AM
UDoug - Iposti enkulu! Ndikhumbula kwasekuqaleni kwikhondo lomsebenzi wam ukusetyenziswa kwamagama asemkhosini ngabaninzi kwinkampani: imfazwe, idabi, iqhinga, amaqhinga, njalo njalo. Besinexhala kakhulu malunga nezinye izinto ezazisenziwa zezinye iinkampani. Ngenkampani yam, andinaxhala labanye abantu. Kuya kufuneka sigxile ekuziseni ezona mveliso zilungileyo kunye neenkonzo esinokuzenzela abathengi bethu. Ngamanye amaxesha simkile "kumathuba"; ngamanye amaxesha siye sawadlulisela komnye umntu. Kuninzi esinokujikeleza, ngokoluvo lwam, okoko nje sigxile kwixabiso esizisa ngalo etafileni.
Juni 5, 2012 ngo-1: 51 AM
Ndiyayithanda ifilosofi yakho yokubeka iimfuno zabathengi
okokuqala njengoko ndingumlandeli omkhulu wokubonelela ngenkonzo yabathengi ekhethekileyo. Ndifuna ukwazi
ukuba iinkampani ozithumela abathengi zibuyisa ubabalo ukuba
bafumana umthengi abangadibani naye. Ngaba ufumana uninzi lokudluliselwa kubo
okanye uyakholelwa nje kwi karma elungileyo yokunceda umthengi?